Buyzụta Ngwa ngwa na-agbapụta mmiri na nchekwa ọsọ ọsọ na-ehichapụ efere - mbupu n'efu & enweghị ụtụ isi | WoopShop®
Fast Defrosting & Rapid Safety Thawing tree efere
Agba L M Silicone pad S
Fast Defrosting & Rapid Safety Thawing tree efere - L na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Aha ihe: Defrost Tray
Size: S: 23 * 16.5 * 0.2cm, M: 29.5 * 20.5 * 0.2cm, L: 35.5 * 20.5 * 0.2cm
Arọ: S: 210g / M: 320g / L: 350g
Njirimara: Rapid Defrost Tree, Oyi kpọnwụrụ friji
Site na tọ na-akpọtụrụ nri na mbadamba efere site na iji ihe ndị pụrụ iche na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi na usoro, nri ndị oyi kpọnwụrụ na-agbaze ngwa ngwa
Mfe ọcha! Usoro pụrụ iche na-eme ka ehicha efere dị mfe ihicha, mmanụ na-abụghị osisi
Ọ dị mfe iji, ịchekwa ọkụ eletrik na nchebe gburugburu ebe obibi! Enweghị mkpa maka ego ndị ọzọ, chekwaa mmiri na ọkụ eletrik
:Kpụrụ: Ngwongwo a na-ekpochapu mmiri bụ ihe pụrụ iche na-arụ ọrụ ọkụ nke oge 20,000 nke nke ọla nkịtị, na-enweta mgbanwe ọkụ ọkụ ọsọ ọsọ, na-ekwe ka nri ndị oyi kpọnwụrụ iji nweta mmetụta kachasị ngwa ngwa
Uru: ọsọ, obere oge, nwere ike ịchekwa oge mbụ ịchọrọ, ma nwee ike idobe ụtọ mbụ na nri nke nri, ahụike, na ịdị ọcha. Nguzo nke corrosion, ndụ ogologo oge
ọghọm: N'ihi iji ihe nchebe gburugburu ebe obibi pụrụ iche, ọnụahịa ga-adịtụ elu
Efere igbaze - thawing efere tụnyere ndị ọzọ thawing ụzọ
Oge ọsọ ọsọ na-eji efere ngwa ngwa bụ 5.6 ugboro ọsọ ọsọ nke seramiiki nkịtị.
Ọsọ nke ịkụ ọkụ na-eji efere ngwa ngwa bụ ugboro 5.6 nke nkịtị seramiiki. Mara: A na-eme ka ngwa ngwa seramiiki dị ihe dị ka nkeji 91 na efere efere na-eme ka ihe dị ka nkeji 16.
Site n’ịgbaze ọsọ ọsọ, ịmịpụ efere nwere ike imechi nri na gravy n’ime anụ ahụ, belata ihe ọ juiceụ juiceụ na-erubiga ókè mgbe nri na-agbaze, ma jigide ihe na-atọ ụtọ.
Mfe ọcha! Usoro pụrụ iche na-eme ka efere efere dị mfe ihicha ma ghara ịrapara na mmanụ.
Ọ dị mfe iji, nchekwa nchekwa, na nchedo gburugburu ebe obibi! Enweghị ego ọzọ achọrọ iji chekwaa mmiri na ọkụ eletrik.
Site na kọntaktị nke nri na mbadamba efere na-eji ihe pụrụ iche na gburugburu ebe obibi arụ ọrụ, a na-agbazigharị nri ndị oyi kpọnwụrụ ngwa ngwa
Enweghị ike ịzụta pad silikọn iche iche n'ihi ihe atụ. Ọ dị ha mkpa ịzụta ọnụ na efere ọkụ. Anyị agaghị ebuga pịlịkị silicone ahụ iche.
1 * Square gbazee efere （Silicone pad-apụghị zụrụ iche iche n'ihi nlereanya ihe. Ọ dị ha mkpa ịzụta ọnụ na efere ọkụ. Anyị agaghị ebuga pịlịkị silicone ahụ iche)
Ihe niile na-acha uhie uhie
Nnọọyyyyy ọma, afọ ojuju!